ခရစ်တော်၌ကြီးထွားခြင်း Archives | The Blue Book
ဘုရားသခင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ခံတယ် လူအများစုဟာဘဝမှာတခါတစ်ရံငြင်းပယ်ခံရတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့အနီးဆုံးလူရင်းနှီးရတဲ့သူတွေကတခါတလေနာကျင်စရာတွေပေးတတ်ပါတယ်, ရင်နှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးတွေပြတ်တောက်သွားတဲ့အခါ အထီးကျန်မှုတွေနဲ့ ငါ့ဟာအသုံးမဝင်တဲ့လူပါလားဆိုတဲ့ ခံစားချက်တွေဖြစ်လာစေပါတယ်။သင့်အတွက်သတင်းကောင်းက ,ဘုရာသခင်ဟာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့နာကျင်မှုတွေကိုပျောက်ကင်းစေမယ်, သူဟာကျွန်ုပ်တို့ကိုလက်ခံပေးတယ် , ဘုရားသခင်ရဲ့ အချစ်ဟာ အခြေအနေပေါ်မမူတည်ပါဘူး။ ငြင်းပယ်ခံရတဲ့အခါခံစားရတဲ့နာကျင်မှု ယောဟန် ၄: ၃-၂၉ ကိုဖတ်ပြီးဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေကြည့်ရအောင် အမျိုးသမီးတယောက်ဟာ နေ့လည်နေပူပူကြီးမှာ တယောက်ထဲရေခပ်ဖို့ရေတွင်းဆီလာနေပါတယ်, သူမဟာ အကြိမ်များစွာလက်ထပ်ထားတာကြောင့် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေအားလုံးကသူမကို အပေါင်းအသင်းမလုပ်ပဲ ပစ်ပယ်ထားခြင်းခံရတာပါ။ သခင်ယေရှုအားဖြင့် ဒီအမျိုးသမီး ဘယ်လိုအံ့ဩစရာအမှုတွေကြုံခဲ့ရလဲ? ဘဝထဲမှာ, ငြင်းပယ်မှုတွေခံလာရတဲ့အခါဘာတွေဖြစ်ပေါ်တတ်သလဲ? ငြင်းပယ်ခံရခြင်းရဲ့အကျိုးဆက်ကဘာတွေဖြစ်မလဲ? အခြားသူတွေရဲ့လက်ခံမှုတွေရလာအောင်လူတွေဘာလုပ်တတ်တတ်ကြသလဲ? သခင်ယေရှုကအဲ့ဒီအမျိုးသီးကိုသူလက်ခံတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြခဲ့လဲ? ခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ပင် ငြင်းပယ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့ခံစားရတဲ့ ငြင်းပယ်ခံရတဲ့ခံစားချက်ကို သခင်ယေရှုနားလည်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ? ငြင်းပယ်ခံရတဲ့အခါဘယ်လိုအောင်မြင်စွာကျော်လွှားမလဲ? ယောဟန် ၄ထဲက အဖြစ်အပျက်ကိုကြည့်ရင် , ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ ဘဝဟာ သခင်ယေရှုရဲ့စကားကိုယုံကြည်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တာနဲ့ လုံးဝပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာလက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့အောက်မှာရေးထားတဲ့ကျမ်းချက်လေးတွေအတိုင်း တဆင့်စီလုပ်ဆောင်သွားရအောင်။ 1. ၁။ အခြေအနေပေါ်မူတည်ခြင်းမရှိတဲ့လဘုရားသခင်ရဲ့အချစ်ကိုလက်ခံရအောင် – ၂။ သင့်ဘဝထဲကဟာကွက်ဖြစ်နေတဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ဘုရားသခင်ထံကစီးဆင်းလာတဲ့ “အသက်စမ်းရေ”နဲ့အစားထိုးလဲလှယ်ကြရအောင်- ၃။ ဘုရားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ပါ! …